Wararka - Sida loo doorto cadayga
Ugu horreyntii, markaad iibsaneyso koob lagu nadiifiyo afka, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato naqshadeynta farsamaysan ee cadayga, taas oo lagu sharraxay saddexda tallaabo ee soo socda.
Ugu horreyn, waxaan u baahannahay inaan fiiro gaar ah u yeelano qaabka naqshadeynta cadayga, sida naqshadda qaab-dhismeedka mowjada, oo si fiican ugu habboon godka afka oo ilkaha si fiican u nadiifin kara.
Talaabada labaad badanaa waa daaweynta timaha jilicsan ee cadayga, sida cufnaanta sare ee timaha toosan ee jilicsan, taas oo sifiican u ilaalin karta ilig kasta si loo yareeyo saameynta taranka bakteeriyada.
Tallaabada saddexaad waxay u baahan tahay fiiro gaar ah oo ku saabsan faahfaahinta maaraynta cadayga, sida haddii furitaanka faraha uu ka khaldan yahay, iyo in midabka cadaygu uu buuxo oo dhalaalayo.
Tallaabada xigta, waxaan u baahannahay inaanu fiiro gaar ah u yeelano shuruudaha cadayga, sida inuu caday jilicsan yahay, inuu madaxa burushku nabad qabo oo uu buuxiyo shuruudaha heerka cuntada, iyo in baakadaha nadaafadda leh la damaanad qaado. Isla mar ahaantaana, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato cadayga cadayga, sida haddii daaweynta fiiqiddu ay si wax ku ool ah u yareyn karto xanaaqa cirridka isla markaana lagu gaaro saameynta dabacsanaanta buuxinta godka afka, iyo in gadaasha madaxa burushka sidoo kale wuxuu leeyahay shaqo nadiifin. Sidoo kale waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho qeexitaanka alaabta ee cadayga, sida maaddada, midabka, waxtarka, tayada xiirashada, cabbirka, iwm si loo hubiyo saameynta khibrada isticmaalka.
Ugu dambeyntii, waxaa jira qaabab badan oo midab ah burushka cadayga. Markaad dooranaysid caday, waa inaad tixgelisaa inaad mid doorato iyadoo loo eegayo doorbidaha midabkaaga gaarka ah iyo qaababka aad ugu jeceshahay, ugu dambayntiina dooro cadayga aad jeceshahay.